ट्विटरमा ट्वीटरडेक टोलीको फाइदा कसरी लिने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 305
धेरै प्रकारका खाताहरू नेटवर्क भित्र काम गर्दछ। मुख्य एक मनोरञ्जन खाता हो जुन एक व्यक्तिले आफ्नो दिन दिनको लागि राख्न सक्छ, समाचार वा आफ्ना साथीहरूको अनुभवमा आफैंलाई अपडेट गर्नु बाहेक अरू कुनै उद्देश्य हुँदैन। त्यहाँ मानिसहरुको खाताहरु पनि छन् जसले यसलाई प्रभावकारी उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दछ।
अन्तमा, तपाईं डिजिटल मार्केटिंग खाताहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ, जहाँ व्यक्ति र कम्पनीहरूले उनीहरूको उत्पादन र सेवाहरूको विज्ञापन गर्छन्। खाताहरूको यस अन्तिम समूह को लागी, सामाजिक नेटवर्क कम्पनीहरु को गतिविधि को यस प्रकार को प्रबन्ध गर्न केहि उपकरणहरु बनाएको छ।
ट्विटरमा, यो सुविधालाई चिनिन्छ TweetDeck र यी खाताहरू प्रबन्ध गर्ने व्यक्तिहरूको समूह ट्वीटडेक टोलीका रूपमा चिनिन्छ
ट्विटडेक टोलीहरू के हुन्?
ट्विटरको ट्वीटडेक सुविधाले २०० 2008 मा काम गर्न शुरू गर्यो। यससँग तपाईं खाता पासवर्ड साझेदारी नगरीकन, विश्वासिला व्यक्तिहरूको समूहसँग खाता प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ।
यो मोड व्यवसाय खाताहरूको लागि आदर्श हो जहाँ धेरै व्यक्तिको पहुँच हुनुपर्दछ। यद्यपि, एक सदस्यलाई मात्र खाताको सबै कार्यहरू गर्न सक्षम हुन अनुमति छ, तर बाँकीले समर्थनको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ।
ट्विटडेक टोलीमा के भूमिका छ?
प्रणालीले यी टोलीहरूमा तीन प्रकारको भूमिका विन्यास गरेको छ:
मालिक, जो खाताको सिर्जनाकर्ता हुन सक्छ, पासवर्ड, फोन नम्बर र खाता खोल्न आवश्यक पर्ने अन्य जानकारी प्रबन्ध गर्दछ। खाता
प्रशासकले अन्य सदस्यहरूलाई टोलीमा आमन्त्रित गर्दछ र टिमको तर्फबाट ट्वीटर कार्यहरू गर्नुहोस् जस्तै ट्वीटिंग, रिट्वीटिंग, मेसेजिंग, बुकमार्किंग, लाइक, र अधिक धेरै।
यसले अरूलाई पनि अनुमति प्रदान गर्दछ सदस्य, त्यसैले यो ती कार्यहरूको लागि जिम्मेवार मान्दछ।
प्रशासक, जसले अन्य सदस्यहरूको लागि पहुँच अनुमति प्रदान गर्दछ, र तिनीहरूलाई माथि वर्णन गरिएको समान कार्यहरूमा प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर पासवर्ड ह्यान्डल गर्न सक्दैन।
सहयोगी, जसले उही कार्यहरूमा टीमलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ, तर तपाईं कुनै अनुमति अनुमति दिन सक्नुहुन्न।
म कसरी मेरो ट्विटडेक टोलीहरू सिर्जना गर्न सक्छु?
सुरू गर्न, ट्वीटडेक.ट्विटर.कटमा जानुहोस् र लग इन गर्नुहोस्। यदि तपाईं पहिले नै ट्विटरमा साईन ईन हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यसलाई ट्विटडेक ईन्टरफेसमा फेरि गर्नुपर्दैन।
पर्दाको बायाँ तिर, तपाईं धेरै विकल्पहरू सहित स्तम्भ देख्नुहुनेछ, यस स्तम्भको तलमा तपाईं प्रतिमा फेला पार्नुहुनेछ। "खाताहरू"।
एक ट्याब तुरून्त प्रदर्शित हुनेछ, जहाँ तपाईं आफ्नो खाता जानकारी पाउनुहुनेछ, र तपाईंको नाम अन्तर्गत तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं शीर्षक छ "टीम प्रबन्ध गर्नुहोस्"।
तपाइँ एक आइकन पाउनुहुनेछ "तपाइँको अर्को खाता लि Link्क गर्नुहोस्", तपाईंसँग सम्बन्धित अन्य खाताहरू सम्बद्ध गर्न।
थिचेर "टीम प्रबन्ध गर्नुहोस्" तपाइँ टोली सदस्यहरू थप्न सक्नुहुन्छ, मेनूको अर्को अंश बक्सको साथ प्रदर्शित हुनेछ "टोली सदस्य थप्नुहोस्"। खाताको प्रयोगकर्ता नाम टाइप गर्नुहोस्। क्रस आकारको आइकनमा क्लिक गरेर सम्बन्ध पुष्टि गर्नुहोस्।
तपाईं मा थिच्न सक्नुहुन्छ "पुष्टिकरण चरण" तपाईंले TweetDeck टीम प्रयोग गर्न सुरु गर्नु अघि।
तपाईं स्तम्भको अन्त्यमा धेरै विकल्पहरूको साथ ट्विटड्याक प्रबन्ध आइकन फेला पार्न सक्नुहुनेछ: "रिलीज नोटहरू", "कीबोर्ड शटकर्ट", "खोज सुझावहरू", "सेटि "हरू" र "लग आउट"।
1 ट्विटडेक टोलीहरू के हुन्?
2 ट्विटडेक टोलीमा के भूमिका छ?
3 म कसरी मेरो ट्विटडेक टोलीहरू सिर्जना गर्न सक्छु?
कसरी सम्बद्ध ट्विटर खाताहरू?